Surface Go: ny solon'ny iPad amin'ny Windows 10 ary saika mitovy ny vidiny | Vaovao momba ny gadget
Surface Go: ny solon'ny iPad amin'ny Windows 10 ary saika mitovy ny vidiny
Ignacio Sala | | portable, takela-bato
Hatramin'ny nanolorana ny maodely iPad voalohany, tamin'ny taona 2010, ny orinasa monina ao Cupertino dia nanamarika hatrany ny làlana ho an'ity tontolo iainana ity, tontolo iainana iray izay nisy fisondrotana sy fidinana noho ny tahan'ny fanavaozana ambany nataon'ny mpampiasa. Na dia nampiditra lafin-javatra vaovao aza i Apple tato ho ato ao amin'ny kinova iOS ho an'ny iPad, ity manohy manolotra fetra maromaro.
Microsoft koa dia namorona ecosystem vaovao an'ny takelaka, fa tsy tahaka ny maodelin'i Apple, ireto no izy tantanin'ny kinova Windows iray manontolo, izay ahafahan'ny mpampiasa mitondra am-pitiavana ny takelaka misy azy ireo amin'izay tiany, manana fidirana amin'ny karazana rindranasa ilain'izy ireo, nefa tsy mila mampiasa ireo rindranasa vita amin'ny takelaka, toy ny tranga misy amin'ny iPad. Saingy tsy nisy vidiny.
Ny orinasan-tserasera Redmon dia nanolotra izay mety ho vahaolana mahomby indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra mitady takelaka misy vidy sy mora vidy miaraka amin'ny kinova Windows 10. Miresaka momba ny Surface Go izahay. Ny Surface Go dia takelaka iray an'ny 10 santimetatra, misy refy 243,8 x 175,2 sy 7,6 milimetatra ary lanja 544 grama. Raha ampidirintsika ny tratra fitendry Type Cover dia mitombo hatramin'ny 771 grama ny lanjany.
1 Famaritana ambonin'izay
2 Ny vidiny sy ny fisian'ny Surface Go
3 Manitatra ny fianakaviana Surface
Manolotra antsika ny Surface Go a mpamaky karatra microSD, jack headphone ary seranan-tsambo USB-C. Ao anatiny, Windows dia manome antsika fikirana roa samy hafa amin'ny resaka kinova amin'ny rafitra fiasa: Windows 10 Home miaraka amin'ny S Mode ary Windows 10 Pro miaraka amin'ny S Mode. Windows S dia kinova Windows izay mamela anao hametraka rindranasa izay misy ao amin'ny magazay fampiharana Microsoft na dia azonay atao aza desactivar ity fomba ity hanovana ny fitaovana ho PC hampiasana sy hahafahana mametraka apetraka.
Mikasika ny pitsopitsony ara-teknika, ny Surface Pro dia tantanan'ny Intel Pentium Gold 4415Y 1,6 GHz, satria PC ianao, ny fahombiazany dia mety miovaova arakaraka ny habetsaky ny RAM hitantsika ao anatiny. Hita ity modely ity ao amin'ny Kinova RAM 4 sy 8 GB. Mikasika ny fitehirizana, Microsoft dia manome modely 3: 64 GB eMMC, 128 GB SSD ary 256 GB SSD.
Ny efijery, lafiny iray hafa izay raisin'ireo mpampiasa maro rehefa mividy takelaka dia manome antsika a Tabilao 10-mirefy misy vahaolana 1.800 x 1.200 sy tahan'ny efijery 3: 2. Araka ny filazan'ny Microsoft, ny fizakantenan'ny Surface Go dia mahatratra 9 ora, fizakantena iray izay mametraka azy saika mitovy amin'ny Apple iPad.
Ity maodely vaovao ity ao anatin'ny faritra Surface, dia mifanaraka amin'ny Surface Pen, mampiditra a fonosana azo esorina ao aoriana izay mamela antsika hametraka izany amin'ny toerana rehetra. Ny Surface Pen, ary koa ny Type Cover izay mampiditra trackpad, dia amidy samy hafa.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Surface Go
Microsoft dia hametraka ny Surface Go amidy amin'ny 2 Aogositra Any Etazonia sy Espana, ankoatry ny firenen-kafa, na dia amin'izao fotoana izao, ny kinova Wifi ihany no ho hita tsy misy fifandraisana LTE, maodely iray izay nolazain'ilay orinasa fa hamely ny tsena amin'ny volana ho avy ary tsy mbola nisy ny vidiny efa nambara.
Surface Go miaraka amin'ny RAM 4GB sy fitehirizana eMMC 64GB miaraka amin'ny Windows Home S: Dolara 399.
Surface Go miaraka amin'ny RAM 4GB sy fitehirizana eMMC 64GB miaraka amin'ny Windows Pro S: Dolara 449.
Surface Go miaraka amin'ny RAM 8GB sy fitehirizana SSD 128GB miaraka amin'ny Windows Home S: Dolara 549.
Surface Go miaraka amin'ny RAM 8GB sy fitehirizana SSD 128GB miaraka amin'ny Windows Pro S: Dolara 599.
Surface Go miaraka amin'ny RAM 8GB sy 256GB fitehirizana SSD misy fifandraisana LTE: miandry mba hanamafisana ny fisian'ny sy ny vidiny.
Ny vidiny etsy ambony dian ho an'ny ekipa irery. Samy amidy samy hafa ny Type Cover, Surface Pen ary ny Mouse. Ny vidin'ny fitendry dia miovaova eo anelanelan'ny 99 sy 129 dolara. Ny vidin'ny totozy dia $ 39 ary ny Surface Pen dia $ 99.
Mitovy amin'ny an'ny iPad an'ny Appl isikae, izay ahitana ny fitaovana fotsiny ny vidiny ary amidy tsy miankina amin'ny vidiny avo kokoa noho izay natolotr'i Microsoft ho an'ireo kojakoja ireo ny kojakoja rehetra, fonony fitendry ary ny Apple Pencil.
Ny modely Surface Go rehetra dia tonga eny an-tsena miaraka amin'ny Windows S, na amin'ny versi Home na amin'ny Pro version. Ity kinova ity dia manome antsika fetra voafetra rehefa mametraka rindranasa avy any ivelan'ny Microsoft Store, fa raha mahita anao mila izany izahay dia afaka manao fanavaozana ny kinova an-trano sy Pro mahazatra maimaim-poana.
Manitatra ny fianakaviana Surface
Miaraka amin'ny fanombohana ny Surface Go, Microsoft dia manana maodely 5 samihafa eo an-tsena ao anatin'io faritra io amin'izao fotoana izao, ary manamafy izany fa nandray ilay Mazava ho azy fa tokony hanaraka taona vitsivitsy lasa izayNa dia, mahita ny tahan'ny fitomboan'ity modely orinasa vaovao ity aza, dia toa mendrika izany ny fiandrasana.
Porofo iray hafa no hita amin'ny fanombohana ity modely vaovao ity ho an'ny manarona ny tsenan'ny takelaka, tsena izay tsy misy ifandraisan'ny Surface Pro noho ny fahombiazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » Surface Go: ny solon'ny iPad amin'ny Windows 10 ary saika mitovy ny vidiny
Tsy hamela anao hifandray amin'ireo tamba-jotra Wi-Fi mampiasa WPS ny Android P
Nokia dia manohy manao ny asany ary ny Nokia 3.1 dia misy any Espana ankehitriny